Etu esi akwagharị ma ọ bụ detuo faịlụ ma ọ bụ folda na Linux? | Site na Linux
Etu esi akwaga ma ọ bụ detuo faịlụ ma ọ bụ folda na Linux?
Ọtụtụ n'ime anyị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị akụkụ ka ukwuue anyi ji ya eme ihe n’ile ihe ngosi ma ọ bụ desktọọpụ gburugburu ebe obibi na-ekwu okwu. Ọrụ nke ịkwaga, dezie, nyegharịa faịlụ ndị ọzọ ma ọ bụ folda ndị ọzọ a na-eme ha n'ụzọ dị mfe site na ịpị aka ole na ole.
Ma ihe na-eme mgbe ị ga-eji mmegharị ndị a na sava ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha na-ejikarị jikwaa naanị site na njikwa njikwa, nke a na-ejikarị na sava raara onwe ya nye, ọ bụ ezie ọ dịghị mgbe ọ na-ewute mara otú e si eme nke a n'ihi na ị maghị mgbe ọ nwere ike iji ọrụ n'aka.
O meela m na n'oge ụfọdụ, efunahụla m eserese na m ga-eji njikwa ahụ iji nwetaghachi ya, mana nke ahụ bụ isi ihe ọzọ.
Ofbọchị nke taa m bịara kọọrọ gị ụfọdụ iwu dị mfe ga-enyere anyị aka ịrụ ọrụ nke idetuo ma ọ bụ ibugharị faịlụ.
1 Etu esi ebugharị faịlụ ma ọ bụ folda na Linux?
2 Etu esi edetuo faịlụ na Linux?
Etu esi ebugharị faịlụ ma ọ bụ folda na Linux?
Ihe mbụ ga-abụ inwe ọnụ Kedu nke ga-abụ ngwa ọrụ anyị nke ga - enyere anyị aka n’ihe a niile, ihe nke abuo bu imeputa ufodu folda ya na ederede ederede n’ime nke a ka ị ghara imebi ma ọ bụ tufuo ozi.
Ihe kachasị eme bụ ịkwaga faịlụ ndekọ maka nke a, anyị ga-eji iwu mv:
Lee ihe anyị na-eme na-akpụ akpụ faịlụ.txt na folda ule nke dị na folda akwụkwọ anyị. Maka nke a, anyị na-eburu n'uche na anyị nọ ugbu a na ndekọ aha ebe faịlụ.txt dị
Mgbe anyị chọrọ ịkwaga karịa otu faịlụ n'otu oge, ụdị njikọ ga-abụ ihe ndị a:
Ugbu a ihe bara ezigbo uru bụ iji * mgbe faịlụ nwere otu isi na aha, dịka ọmụmaatụ:
Amd-ọkwọ ụgbọ ala ...
Yabụ, dịka anyị pụrụ ịhụ, ha nwere otu "AMD" isi iji bugharịa faịlụ ndị ahụ niile nwere otu isi nomenclature, anyị na-eme ihe ndị a:
Otu ihe a metụtara faịlụ ndị ahụ niile nwere otu ụdị, dịka ọmụmaatụ, .doc, .xls, .deb, .rpm wdg. Ikwaga ha anyị na-etinye
Ruo ugbu a, ọ ga-amatacha etu o si arụ ọrụ yana otu anyị nwere ike isi kwado ọrụ a n’ụzọ dị iche iche, mana kedu ihe n’eme mgbe anyị chọrọ ịkwaga ihe niile na ndekọ, ma faịlụ na folda nchekwa.
Maka nke a, anyị ga-eji *, dịka ọmụmaatụ, Achọrọ m ịmegharị ihe niile m decompressed site na wordpress na ndekọ abụọ gara aga:
Matakwu banyere iwu anyị nwere ike iji nwoke ya ma ọ bụ jiri -help oke, ebe a ka anyị ga-ahụ akụkụ ya niile.
Etu esi edetuo faịlụ na Linux?
Maka nke a ọ fọrọ nke nta yiri nke ahụ, iji bugharịa faịlị ma ọ bụ folda si na nke ọzọ, ebe a debe faịlị na folda ebe ha si ma mepụta otu n'ime ndekọ aha ahọpụtara.
Un iwu dị mfe iji detuo otu faịlụ ma ọ bụ folda site n'otu ndekọ gaa na nke ọzọ:
Morezọ doro anya karị iji lee ya anya:
A na-ejikarị iwu a eme ihe dị ukwuu iji mee nkwado nke faịlụ ma ọ bụ folda a ga-edezi, ebe ọ na-emepụta mkpokọta zuru ezu, mana yana aha dị iche, ihe atụ dị irè:
para detuo otutu faịlụ ma obu folda:
Ugbu a ọ bụrụ na anyị chọrọ i copyomi ihe niile nwere folda ebe anyị kwụ gaa na ndekọ ọzọ:
Ugbu a ọ bụrụ n’anyị chọrọ idetu ihe ndekọ site n’otu ebe ruo ebe ọzọ
Ọ dị mkpa ka ị bụrụ otu ọkwa dị n'okpuru ndekọ na anyị ga-edepụta, n'ihi na ọ bụrụ na anyị nọ n'ime ya ọ dị mkpa ịkọwapụta ụzọ zuru oke, ebe ọ bụrụ na anyị etinye iwu ahụ n'ụzọ m si tinye ya, ọ ga-emepụta ndekọ efu.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata ihe niile ya parameters anyị na-adabere na ya nwoke ma ọ bụ na -help
N'etinyeghị oge ọzọ, ha bụ iwu ndị bụ isi, ojiji ha nwere ike inyere gị ezigbo aka yana ị ga-akpachara anya na ha ebe ọ bụ na a na-atụ aro ka ị jiri ụdị recursive, nke ejiri ya na -r oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Etu esi akwaga ma ọ bụ detuo faịlụ ma ọ bụ folda na Linux?
Ọ bụrụ na m chọrọ idetuo faịlụ niile site na otu folda gaa na nke ọzọ ọ ga-abụ mgbe ahụ
cp / * / aha / nchekwa / ebe ??
guzo na folda ebe m nwere faịlụ idetuo?
Zaghachi Jorge C Rodriguez S
Achọrọ m idetu ụfọdụ ederede site na isi iyi-faịlụ gaa ebe a na-aga, mgbe ụfọdụ ọ bụ ndekọ-site na ndekọ-ruo nso, kedu ka m ga-esi mee nke a?
Zaghachi Juan Manuel Carrilllo Campos
Olee otú iji wụnye AMD gpu pro ọkwọ ụgbọala na Linux Mint?